Agụụ agụ iyi, Steve Irwin Egburu na 44 | Martech Zone
Monday, September 4, 2006 Sọnde, Septemba 30, 2012 Douglas Karr
Dabere na Reuters, Steve Irwin e gburu site stingray taa. Enwere m nkasi obi m na ezinụlọ Irwin yana mba Australia dum - Irwin nwere nnukwu mmetụta na gburugburu ebe obibi na ihe okike.
Echere m na ndị mmadụ anaghị ewere nke a n'ụzọ na-ezighi ezi, mana ọ bụghị ihe ijuanya nye m na nke a mere. Echeghị m echiche, na-ele ihe ngosi ya, na nke a ga-abụ okwu 'ọ bụrụ', ọ bụ naanị okwu nke 'mgbe'. Agwara m nna m na nwa m nwoke banyere ya… M hụrụ ihe ngosi ahụ n'anya mana enwere m mmetụta na Irwin weere ụfọdụ ihe egwu dị egwu.
Nwa nwoke Australia magburu onwe ya ma maa mma. - Prime Minista Australia John Howard
Echetara m na m na-ekiri otu ihe nkiri ebe agwọ tara Irwin nke ọ na-enweghị ike ịmata yana ndị ọrụ ya niile gaghachiri n'ụgbọala ha iji mata ma ọ bụ na ọ bụ nsi. Ọ bụghị, mana ọ bụ mgbe ahụ ka m kpebiri na Irwin tinyere ihe ize ndụ karịrị nnọọ mmadụ nkịtị. Ka oge na-aga ma ị na-anọgide na-asọpụrụ ihe ize ndụ, ọ́ bụghị ihe dị adị itinye ihe ize ndụ ka ukwuu?
A sị na o wereghị ihe ize ndụ ndị a, ọ nwere ike ọ gaghị elebara anya n'ihe ọ na-eme dị ka ọ mere. Agbanyeghị, enweghị m ike ịjụ ma ọ bara uru. Kedu ụzọ ọ bụla, Irwin bụ onye nwụrụ n'ihi okwukwe ya na gburugburu ebe obibi ya na ihe okike ya. Otu ihe kpatara ọ hụrụ n'anya wee dịrị ndụ gụpụtara Irwin gburu ya.
Prime Minista Australia John Howard nwere ike ikwu na ọdachi kachasị mma, na-ekwu "Australia enwekwaghị nwa nwoke mara mma ma mara mma."
Emelitere: Akụkọ Sidney News